कोरोनाविरुद्धको खोप आज काठमाडौं आइपुग्दै, पूरा पढ्नुहोस्.. – Wow Sansar
कोरोनाविरुद्धको खोप आज काठमाडौं आइपुग्दै, पूरा पढ्नुहोस्..
८ माघ, काठमाडौं । भारतले नेपाललाई अनुदानमा दिने घोषणा गरेको कोरोनाविरुद्धको खोप आज काठमाडौं आइपुग्दै छ ।
भारतले बुधबार नेपाललाई १० लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो । अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप भारतले नेपाललाई दिन लागेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिहीबार बिहान एयर इन्डियाको विमानबाट कोरोनाविरुद्धको खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्ने छ । विमानस्थलमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खोप हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
ती खोपलाई टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा भण्डारण गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रत्येक प्रदेशको भण्डारण केन्द्रमा खोप पठाइनेछ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Prevधन लाभ हुनु अगाडि मिल्छन् यस्ता सङ्केत, वेवास्ता नगरी ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्
Nextनेपालमै भेटियो १५ लाखको अचम्मको ढुंगा, छोएकै भरमा २० वर्ष आयु बढ्ने विश्वास(भिडियो)
नुवाकोट काण्ड: बिनालाई धेरै जनाले ब;लात्कर गरेर मार्यो,यो;नी छि;या-छि;या च्या;तेको हेर्नुस,२जना पक्राउ ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
म्युजिक भिडियोमा खेलाउँछु भनेर यस्तो सम्म गरे, युवती रुँदै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6880)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (4006)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3465)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1483)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1235)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1179)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1144)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1123)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1047)
महान श्रीमान भनिएका बिनोद खड्काले पत्नि अनिता खड्कालाई धोका दिँदै अर्की महिलासँग गरे विबाह, बिनोदले अर्कैसँग विबाह गरेपछि हेर्नुहोस् के के भयो ? (792)
‘सलुट’ यी नै हुन् ! ४० जना सङ्ग ए’क्लै ल’डेर ना’रीको ई’ज्ज’त जो’गाउने एक नेपाली (गोर्खाली)
अब त मलाई पनि विवाहको रहर जागिसक्यो नि…कोही छ सिउँदो भरिदिने